Oge ngosi nke Xiaomi Black Shark 2 bụ nke gọọmentị | Gam akporosis
Xiaomi Black Shark 2 enweela ụbọchị ngosi
Eder Ferreño | | Mobiles, Xiaomi
Xiaomi bụ otu n'ime ụdị ndị nwere ama ama egwuregwu ya na ahịa. Ọ bụ ezie na akara ndị China na-akwadebe ugbu a ịmalite ọgbọ ọhụrụ nke Black Shark a. A nụla asịrị maka izu ole na ole na ekwentị a nwere ike ịbịa tupu njedebe nke afọ, iji merie ekwentị ọhụrụ Razer. Ma ugbu a, anyị nwere data karịa na ngosipụta nke ngwaọrụ a, n'ihi na ụbọchị ngosi ya adịlarị gọọmentị.
Busiest izu n'ihu maka Chinese ika. Verytụtụ a sekwuputara ụbọchị ngosi nke Xiaomi Mi Mix 3 na ugbu a Ubochi nke ohuru Black Shark 2 biara abata Nke ika. N'ime otu izu anyị nwere ike izute ya.
Ọ ga-abụ na Ọktọba 23 ka a na-egosipụta Xiaomi Black Shark 2 nke a. Ọgbọ ọhụrụ nke Chinese ika si gaminggba Cha Cha ama ga-ọchịchị adịghị anya. Ọ bụ akụkụ na-eto eto, ha na-achọkwa iji nsonaazụ ọma nke ihe nlereanya a rụpụtara n'ahịa.
Companylọ ọrụ ahụ ga-eme ihe omume na China nke ọ ga-eweta ihe nlere a. N'oge a anyị enweghị data ọ bụla na nkọwa ya. Enweela ụfọdụ asịrị, mana ọ nweghị ihe doro anya. Dị ka ọgbọ mbụ, ngwaọrụ dị ike nke nwere arụmọrụ dị ukwuu na-echere anyị.
O yiri ka a ga-ahapụ Black Shark 2 a n'ụwa niile. Ekwentị mbụ enwebeghị nkesa kachasị mma n'ụwa niile, mana ọ dị ka akara ahụ na-achọ ịgbanwe ya na ngwaọrụ ọhụrụ a. Ya mere na ọ ga-ekwe omume ịzụta ya n'ọtụtụ ahịa, ọ ga-abụ na Spain nọ n'etiti ha.
N'ime otu izu, anyị ga-ama ihe niile gbasara Xiaomi Black Shark 2 a. Anyị ga-elebara anya na data anyị na-enweta na ekwentị. Anyị ga-agbaso ihe omume a na mmasị na Ọktọba 23rd.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Xiaomi » Xiaomi Black Shark 2 enweela ụbọchị ngosi
Huawei Mate 20 na Mate 20 Pro: Huawei ohuru ohuru
Etu esi hazi Blokada, ndị na - egbochi mgbasa ozi weebụ kacha mma, ngwa na egwuregwu